Guddiga doorashooyinka lagu mursansan yahay oo soo saaray jadwalka doorashada - Awdinle Online
Guddiga doorashooyinka lagu mursansan yahay oo soo saaray jadwalka doorashada
Xubnaha Guddiyada doorashooyinka lagu mursan yahay ee Soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada doorashada Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Guddigaa ayaa waxaa ay sheegeen in, iyaga oo tix raacaya qodobada heshiiska 17 Sebteembar 2020 ay gaareen Madaxda Dowladda & Dowlad goboleedyada, si ay dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah,ay maanta oo ay tariikhdu tahay 23ka Diseembar 2020 shaacinayaan taariikhda rasmiga ah ee doorashooyinka Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ay dhacayaan.
Diiwaangelinta tartamayaasha Doorashada Aqalka Sare ayaa bilaabanaysa 26ka Diseembar 2020, halka laga sugayo Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada in liiska murashixiinta ay soo saaraan 29ka Diseembar 2020, waxaana doorashada kuraasta Golaha Aqalka Sare lagu soo dhammeystirayaa inta u dhaxaysa 31ka Diseembar 2020 ilaa 6da Jannaayo 2021.
Guddiga doorashooyinka lagu mursan yahay ayaa sidoo kale waxaa ay sheegeen in ay rajeynayaan in dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ay si hufnaan leh uga wada qayb qaataan tartanka doorashada, beelaha Soomaaliyeedna ay kaalintooda ka qaataan hawlaha doorashada, xulista ergooyinka iyo ka qeybgalka tartanka kuraasta Labada Aqal, iyada oo laga fogaanayo dhammaan wixii khilaafaad keeni kara.
Ugu dambeyn, korjoogayaasha gudaha iyo dibadda ayay guddiga ugu baqeen inay qaataan doorkooda ku aadan la socoshoda sida doorashooyinka u dhacayaan, si loo xaqiijiyo hufnaanta hannaanka doorashada dalka.
Tallaabadaan ay jadwalka doorashada Baarlamaanka labada Aqal kusoo saareen guddiga doorashooyinka lagu mursan yahay ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli an heshiis laga gaarin Guddiyada oo ay kasoo horjeesteen Midowga musharixiinta Madaxweynaha iyo inta badan Siyaasiyiinta mucaaradka.
Previous articleCiidamo ka wada tirsan dowladda oo ku dagaalamay Muqdisho & khasaaro ka dhashay
Next articleMaxay ka wada hadleen Midowga Musharixiinta & Xubnaha Beesha Caalamka?